စမတ်နာရီ 530mAh အဝိုင်းပုံသဏ္ဍာန် ဘက်ထရီ ထုတ်လုပ်သူများနှင့် တင်သွင်းသူများ - Hi-Chipcom
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > Wearable ကိရိယာဘက်ထရီ > စမတ်နာရီဘက်ထရီ > Smart Watch 530mAh အဝိုင်းပုံစံ ဘက်ထရီ
Smart Watch 530mAh အဝိုင်းပုံစံ ဘက်ထရီ
သင်၏ကျစ်လစ်သောလက်ပတ်နာရီသည် ဖြစ်နိုင်ချေအများဆုံးပမာဏရှိသည့် အဝိုင်းပုံသဏ္ဍာန်ဘက်ထရီလိုအပ်ပါက၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ဘက်ထရီသည် ငွေတောင်းခံလွှာနှင့် ကိုက်ညီမည်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ပုံမှန်စတုဂံပုံဖြစ်သော Li-ion ပိုလီမာဘက်ထရီသာမက၊ Smart Watch 530mAh Round Shaped Battery ၏အကာအကွယ်ပန်းကန်ပြားသည် အာကာသအသုံးပြုမှုကို တတ်နိုင်သမျှတိုးတက်စေရန် ထုတ်ကုန်၏အတွင်းပိုင်းပုံသဏ္ဍာန်နှင့်ကိုက်ညီစေရန် အထူးဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။
ဘက်ထရီ မော်ဒယ်များ များပြားသောကြောင့် မော်ဒယ်အားလုံးကို စာရင်းမသွင်းပါ။ သုံးစွဲသူများသည် အရွယ်အစား မသင့်လျော်ဟု ထင်ပါက၊ ပိုမိုအရွယ်အစား သို့မဟုတ် စွမ်းရည်ပိုရှိသော ရွေးချယ်မှုများကို ရရှိရန် ကျွန်ုပ်တို့အား အသိပေးပါ။
Nominal စွမ်းရည် ၊
4.3*37 မီလီမီတာ (အထူ*အချင်း)
အားသွင်း:0~ 45'ƒ，အားသွင်းခြင်း - 20 ~ 60'ƒ
အပူချိန် -20 ~ 60'ƒ，စိုထိုင်းဆ 60 ± 25％
ISO9001 စနစ်အောင်မြင်ပြီး，UL、ယူအန်、အီး、RoHS、လက်လှမ်းမီခြင်း စသည်တို့
စမတ်နာရီ၊ ကလေးများအတွက် စမတ်နာရီ၊
အီလက်ထရွန်းနစ်သွားပွတ်တံ၊ အဝေးထိန်းခလုတ်များ၊ လျှပ်စစ်ကစားစရာများ
အခြားအရွယ်အစားနှင့် စွမ်းဆောင်ရည်များ လိုအပ်ပါက၊ ကျွန်ုပ်တို့အား အသိပေးပါ၊ သင့်စမတ်နာရီအတွက် အောက်ပါအကွာအဝေးကို စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်ပါသည်။
ဝါယာကြိုးများ / ချိတ်ဆက်ကိရိယာ / PCB
အထူ â‰¥ 2.5 မီလီမီတာ
အကျယ် â‰¥ 10mm
အရှည် â‰¥ 14mm
ကျွန်ုပ်တို့မှ အကြံပြုထားသည် သို့မဟုတ် တောင်းဆိုမှုအရ စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ပါ။
(စွမ်းရည်ပိုကြီးလေ၊ ဘက်ထရီနှင့် စမတ်နာရီ အရွယ်အစားများလည်း ကြီးလေ)
UL1642 ကို စမ်းသပ်မှု စံနှုန်းများအဖြစ် ယူသည်။ နှင့် ထုတ်ကုန်အားလုံးသည် 100% ကုန်ချောစမ်းသပ်မှု အောင်မြင်မည်ဖြစ်သည်။
သံသရာရှည်ပါစေ။ အဆက်မပြတ်အားသွင်းခြင်းနှင့် အားပြန်သွင်းခြင်း အကြိမ် 500 ကျော်ကို ပံ့ပိုးပေးသောကြောင့် ဘက်ထရီပမာဏ 80% ထက်မနည်းပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏စမတ်နာရီဘက်ထရီအားလုံးတွင် ပေါက်ကွဲဒဏ်ခံနိုင်သော အဆို့ရှင်များပါရှိပြီး ပေါ်လီမာဘက်ထရီဆဲလ်များအားလုံးသည် လွန်ကဲသောပတ်ဝန်းကျင်တွင်သာ ပေါက်ထွက်နိုင်ပြီး ပေါက်ကွဲမည်မဟုတ်ပါ။ ထို့အပြင်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီသည် ထုတ်ကုန်ဘေးကင်းမှုနှင့် အရည်အသွေးကိုသေချာစေရန် တင်းကျပ်သောအရည်အသွေးစစ်ဆေးရေးလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုရှိသည်။
သင့်လိုအပ်ချက်များအရ သင့်အတွက် ဝိုင်ယာကြိုးများ သို့မဟုတ် ချိတ်ဆက်ကိရိယာကို ပေါင်းထည့်နိုင်သည်၊ သို့မဟုတ် သင့်လိုအပ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီကြောင်း သေချာစေရန်အတွက် သင့်ဘက်ထရီ၏ အကာအကွယ်ဘုတ်ကို ဒီဇိုင်းဆွဲနိုင်ပါသည်။
1. သင်က စက်ရုံလား။ သင် OEM အော်ဒါလက်ခံပါသလား။
ကျွန်ုပ်တို့သည် 18 နှစ်ကျော် ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ဘက်ထရီထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဖြေရှင်းနည်းများ (ဒီဇိုင်းထုတ်ခြင်း၊ ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ စမ်းသပ်ခြင်း၊ လက်မှတ်နှင့် သင်္ဘောဘက်ထရီများ) ကို ပေးဆောင်ပြီး သင့်ဘက်ထရီလိုအပ်ချက်နှင့်အညီ သင့်အား အကြံပေးပါမည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ကြိုတင်ရောင်းချမှုနှင့် အရောင်းအပြီး ဝန်ဆောင်မှုများကို အခမဲ့ ဆောင်ရွက်ပေးပါမည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘက်ထရီအမျိုးအစားအားလုံးနီးပါး၊ ဆဲလ်ဖုန်းဘက်ထရီများ (အဓိကအားဖြင့် iPhone ဘက်ထရီများ၊ အခြားဘက္ထရီစီးရီးများ၏အမှတ်တံဆိပ်များပါ၀င်သည်)၊ POS ဘက်ထရီများ၊ စမတ်ကျကျဝတ်ဆင်နိုင်သောကိရိယာဘက်ထရီများ၊ အရုပ်ဘက်ထရီများ စသည်တို့ကို ထုတ်လုပ်ပါသည်။ သင့်ထုတ်ကုန်များဘက်ထရီလိုအပ်နေသမျှကာလပတ်လုံး ကျွန်ုပ်တို့သည် သက်ဆိုင်ရာဖြေရှင်းချက်များအား ပံ့ပိုးပေးနိုင်ပါသည်။ အကြံပြုချက်များ။
3. သင့်ဘက်ထရီအရည်အသွေးက ဘယ်လိုလဲ။
ဟိတစ်နှစ်အာမခံကုန်ပစ္စည်းလက်ခံရရှိသောအခါတွင်စတင်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့တွင် ဘက်ထရီထုတ်လုပ်သည့်အချိန်နှင့် ပို့ဆောင်ခြင်းမပြုမီတွင် ကတိကဝတ်များနှင့် ပြည့်မီကြောင်း သေချာစေရန် တင်းကျပ်သော QC အဖွဲ့ရှိသည်။
ဟိကျွန်ုပ်တို့၏ဘက်ထရီများ၏စွမ်းရည်သည် မှန်ကန်ပါသည်။ကျွန်ုပ်တို့၏စွမ်းရည်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ပြိုင်ဖက်များကဲ့သို့ â€œမြင့်မားခြင်းမရှိသော်လည်း၊ ၎င်းသည် ပိုမိုကြာရှည်ခံပြီး သက်တမ်းပိုရှည်ကြောင်း သင်တွေ့ရှိနိုင်သည်။
4. သင့်တွင် ဘယ်လို ပက်ကေ့ခ်ျမျိုး ရှိပါသလဲ။ မင်းရဲ့ ပို့ဆောင်မှုရွေးချယ်စရာတွေက ဘာလဲ။ ပြီးတော့ ပစ္စည်းတွေ ငါတို့ဆီ ဘယ်လောက် မကြာခင် ပို့ပေးမှာလဲ။
အများအားဖြင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် standardwhite box သို့မဟုတ် carton ကိုအသုံးပြုသည်။ Package ကိုလည်း စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်ပါတယ်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ရွေးချယ်စရာများကို အကြံပြုပြီး သင့်ရွေးချယ်မှုအတိုင်း ကုန်ပစ္စည်းများကို ပို့ဆောင်ပေးပါမည်။ ကုန်ပစ္စည်းများကို ပင်လယ်၊ လေကြောင်းဖြင့် သို့မဟုတ် အမြန်ဖြင့် (DHL၊ FedEx၊ ups၊ Ems၊ TNT door todoor shipping)။
ဘက္ထရီအမျိုးအစားနှင့် မှာယူမှုအရေအတွက်ပေါ်မူတည်၍ ထုတ်လုပ်မှုပြီးစီးရန် အချိန်အတိုင်းအတာအထိ ရှိနိုင်ပါသည်။၇ ရက်မှ ၁ လ. (သင့်ရဲ့တောင်းဆိုမှုက အထူးတလည် များပြားနေတယ်ဆိုရင်၊ နှစ်လလည်း ဖြစ်နိုင်တယ်။ အရေးတကြီး လိုအပ်ရင် အရစ်ကျနဲ့ ပစ္စည်းတွေ ပို့ပေးနိုင်ပါတယ်)
5. သင့်ဘက်ထရီများတွင် လက်မှတ်များ ရှိပါသလား။
သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘက်ထရီအားလုံး၏စွမ်းဆောင်ရည်သည်လက်မှတ်စမ်းသပ်မှုအောင်မြင်ရန်အာမခံသည်; ထို့ကြောင့် သင်သတ်မှတ်ထားလျှင် ကျွန်ုပ်တို့သည် ဤလက်မှတ်များကို လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။
6. မင်းရဲ့ အနိမ့်ဆုံး မှာယူမှု ပမာဏက ဘယ်လောက်လဲ။ ကျွန်ုပ်တို့ကို နမူနာများ ပေးပို့နိုင်ပါသလား။
MOQ သည်များသောအားဖြင့် 100pieces. သို့သော် စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားသော ဘက်ထရီဆဲလ်များ၊ ချိတ်ဆက်ကိရိယာများနှင့် PCB များကဲ့သို့သော အထူးစိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်မှုကို လိုအပ်ပါက၊ ၎င်းတွင် ပိုမိုမြင့်မားသော MOQ လိုအပ်ချက်များလည်း ရှိမည်ဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ပုံမှန်အားဖြင့် MOQ မပါဘဲ နမူနာများကို ပေးပါသည်။ နမူနာများ၏ အရေအတွက်နှင့် အနာဂတ် မိတ်ဖက်များပေါ် မူတည်၍ ကျွန်ုပ်တို့ ဆောင်ရွက်ပါမည်။မင်းကိုတောင် အခမဲ့ပေးတယ်။. သို့သော်၊ သင်၏ဘက်ထရီသည် အထူးစိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်မှု လိုအပ်ပါက၊ ပိုမိုမြင့်မားသော MOQrequirements ရှိပါသေးသည်။
သင့်တွင် နောက်ထပ်မေးခွန်းများရှိပါက ကျွန်ုပ်တို့ထံ ဆက်သွယ်ပါ။
hot Tags:: Smart Watch 530mAh အဝိုင်းပုံသဏ္ဍာန် ဘက်ထရီ၊ စိတ်ကြိုက်၊ ထုတ်လုပ်သူများ၊ ပေးသွင်းသူများ၊ တရုတ်၊ စက်ရုံ၊
စမတ်နာရီ ဘက်ထရီ530mAh ဆဲလ်အဝိုင်းပုံသဏ္ဍာန်Li-ion Polymer ဘက်ထရီ
Smart Watch 120mAh ဘက်ထရီ
Smart Watch 250mAh ဘက်ထရီ
Smart Watch 300mAh ဘက်ထရီ
Smart Watch 650mAh ဘက်ထရီ
Smart Watch 450mAh ဘက်ထရီ
Smart Watch 500mAh ဘက်ထရီ